Ịga na Sri Lanka: ndị njem nlegharị anya Spanish chọrọ Visa? | Njem Absolut
Sri Lanka bụ otu n'ime mba ndị na-enwetawanye mkpa n'afọ ndị na-adịbeghị anya dị ka ebe njem nlegharị anya. Obodo a, nke a maara dị ka "akwa India" n'ihi ọnọdụ ala ya, nwere ike ime ka onye ọ bụla na-eme njem nleta na-anọ ụbọchị ole na ole n'ókèala ya daa n'ịhụnanya. Ha Okirikiri ala ugwu jupụtara n'ubi tii ma ọ bụ nnukwu obodo ndị na-achị ọchịchị bụ ụfọdụ n'ime ihe nkiri ya.
Mana obodo ahụ nwekwara ụdị anụmanụ dị iche iche na-ebi n'ime ọhịa na ogige ntụrụndụ mba ya, dị ka enyí na agụ owuru. Ihe oyiyi ya nke Buddha a pịrị apị na nkume na oke osimiri dị n'ebe ndịda zuru oke maka ịkwọ ụgbọ mmiri bụ ụfọdụ ihe na-eme ka ọnụ ọgụgụ na-arịwanye elu nke ndị njem nleta kwa afọ.
1 Mana ndị njem nlegharị anya Spanish chọrọ Visa iji banye Sri Lanka?
2 Usoro dị mkpa iji banye obodo
Mana ndị njem nlegharị anya Spanish chọrọ Visa iji banye Sri Lanka?
Iji gaa na Sri Lanka, ma ọ bụ maka njem nlegharị anya, maka ebumnuche azụmahịa ma ọ bụ maka njem njem na mba ọzọ, ọ dị mkpa ịnweta ụgbọ ala. visa Sri Lanka nke na-enye gị ohere ịbanye ma nọrọ oge na obodo ahụ n'ụzọ iwu kwadoro. Ụmụ amaala Spanish mkpa itinye akwụkwọ maka visa tupu ịga Sri Lanka, na mgbakwunye na inwe ike igosi ihe ndị ọzọ chọrọ nke obodo ahụ chọrọ n'aka ndị njem mba ụwa.
Visa ịbanye Sri Lanka, nke a makwaara dị ka ETA, chọrọ ndị njem niile. Ọ bụ ikike dị irè maka otu ntinye n'ime obodo ma ị nwere ike nweta ya mgbe ị debanyere ụgbọ elu, mana mgbe niile tupu ịbanye na obodo ahụ. Ị ga-egosipụtakwa onye ọrụ mbata na ọpụpụ na ị nwere ihe akaebe nke nkwado ego maka ọnụnọ gị na obodo ahụ, yana gosikwa paspọtụ nke dị irè ma ọ dịkarịa ala ọnwa 6 site na mgbe ị banyere na obodo ahụ.
Ihe ndị ọzọ achọrọ maka ndị na-abanye Sri Lanka, ma n'ihi njem nleta ma ọ bụ maka azụmahịaHa bụ ndoputa nke ụgbọ elu nlaghachi na obodo ọzọ ma ọ bụ kwụọ ụgwọ maka visa azụmahịa pụrụ iche ma ọ bụrụ na ịbanye na obodo maka azụmahịa, ọrụ ma ọ bụ ịzụta na ire ngwaahịa na / ma ọ bụ ọrụ.
Usoro dị mkpa iji banye obodo
Ndị Spain na-eme atụmatụ ịga Sri Lanka ga-enwerịrị ETA Sri Lanka tupu ha abanye na mba ahụ. Ị nwere ike nweta ya site n'ịga ịrịọ ya n'onwe gị na ụlọ ọrụ nnọchiteanya Sri Lanka na Spain, mana ihe kacha mma bụ ime ya site na ịntanetị. Ma ọ bụ na mba Eshia ugbu a na-ekwe ka usoro a na-eme n'ịntanetị iji kwado ohere njem nlegharị anya na mba ahụ.
Ọ dị mkpa ịgbaso usoro iji mezue ụdị ahụ, nke ị nwere ike ịchọrọ ndụmọdụ ọkachamara. Banyere ego iji nweta ETA Sri Lanka, A na-eme atụmatụ na ihe dị ka euro 45 dị ka data ọhụrụ Sri Lanka nyere si dị, Agbanyeghị na ọ nwere ike ịdị iche site na oge ị na-ahazi njem gị. Ọnụ ego nke ETA Sri Lanka maka ebumnuche azụmahịa nwere ike ịnwe ego ọzọ ma e jiri ya tụnyere ETA maka ebumnuche njem.
Ihe na-emekarị n'ụdị usoro a bụ ịnata nzaghachi gọọmentị site na ọwa nkwukọrịta, dị ka email. Nke a mail na-enwetakarị n'ime ụbọchị 7, ya mere ọ dị mkpa ime ya n'oge tupu ụbọchị abanye na obodo ahụ iji jide n'aka na ị nwere ya mgbe oge ruru. Ọ dabara nke ọma enwere ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị na-enye ịme ụdị usoro a nye ndị njem ka ha ghara ichegbu onwe ha maka ihe ọ bụla.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịbanye Sri Lanka n'ihe na-erughị ụbọchị 7 ma ịchọrọ ikike ETA gị ngwa ngwa, enwere ike ịhazi ya mana ị ga-emerịrị ya. gosi na arịrịọ ahụ na ọ bụ usoro dị ngwa na nke a nwere ike inwekwu ego, ebe ọ bụ na ha ga-edozi arịrịọ ETA n'ime obere oge karịa ka ọ dị na mbụ.
Dị ka a pụrụ ịhụ, ọ dị mkpa ka ndị Spen tinye akwụkwọ maka Visa ka ha nwee ike ịbanye Sri Lanka maka ihe ọ bụla mere njem, ma ọ bụ maka njem nlegharị anya ma ọ bụ njem azụmahịa. Usoro dị mkpa nke na-eme ka ndị njem nlegharị anya dịkwuo mfe mgbe ha rutere n'ọdụ ụgbọ elu na nke na-enye ohere ka mba ahụ nwee ike ịchịkwa ndị na-abanye n'ókèala ya ma gafee ókèala ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Ịga na Sri Lanka: ndị njem nlegharị anya Spanish chọrọ Visa?